ယခုနှစ်ရဲ့ဒေါ်လာ ၂၉.၅ မီလီယံအထိ ဝင်ငွေရှိတဲ့ YouTuber အဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အသက် ၉နှစ်အရွယ်ကောင်လေး - Mckzone Daily
ယခုနှစ်ရဲ့ဒေါ်လာ ၂၉.၅ မီလီယံအထိ ဝင်ငွေရှိတဲ့ YouTuber အဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အသက် ၉နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၉ နှစ်အရွယ် Ryan Kaji အမည်ရှိကောင်လေးတစ်ဦးဟာ ယခုနှစ်အတွက် ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံး YouTuber အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Ryan ရဲ့ YouTube channel ဟာ ဒေါ်လာ ၂၉.၅ သန်းကျော်ရရှိပြီး သုံးနှစ်ဆက်တိုက်လုံး ပထမနေရာမှာ ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။Ryan ဟာ အစပိုင်းမှာ ကစားစရာများကို ၎င်းတို့ရဲ့အထုပ်များမှထုတ်ယူပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ unboxing ဗီဒီယိုများကို ဝေမျှပြီးနောက် ကြော်ငြာ စပွန်ဆာများစွာကို ဆွဲဆောင်စေခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်တော့ သူ့မှာ ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ ကစားစရာများ၊ ကျောပိုးအိတ်များ နှင့် သွားတိုက်ဆေးများ စတဲ့ စပွန်ဆာများစွာ ရရှိလာခဲ့ပြီး Nickelodeon channel မှာ TV စီးရီးတစ်ခုလည်း ရှိနေပါပြီ။
အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကလည်း စပွန်ဆာအမြောက်အမြားကို ဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာ Ryan ရဲ့ Ryan’s World YouTube channel ဟာ subscribers ပေါင်း ၄၁.၇ သန်း နှင့် ၁၂.၂ ဘီလီယံ viewအထိ ရှိနေပါတယ်။Ryan ရဲ့မိသားစုက မတူတဲ့ YouTube channel ၉ခုကို အတူတကွ run ပေးခဲ့ကြပြီး Kaji အမည်ရှိတဲ့Ryan ရဲ့onlineနာမည်ကို Guan ဆိုတဲ့အမည်သစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Forbes စီးပွါးရေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ” YouTube ရဲ့အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွင့်သစ်” စာရင်းအရ နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းဖြင့် Jimmy Donaldson a.k.a. Mr Beast ကရပ်တည်နေခဲ့ပြီး Dude Perfect က နံပါတ် ၃ နေရာမှာ ဒေါ်လာ ၂၃ သန်း ၊ Rhett & Link က နံပါတ် ၄ နေရာမှာ ဒေါ်လာသန်း ၂၀ အထိရပ်တည်နေခဲ့ကြပြီး Mark Fischbach (Markiplier) က ဒေါ်လာ ၁၉.၅ သန်းဖြင့် နံပါတ် ၅ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ထို့အပြင် Forbes ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ YouTube မှာ Nastya လို့လူသိများတဲ့ အသက် ၆နှစ်အရွယ် Anastasia Radzinskaya အမည်ရှိတဲ့ ရုရှားကလေးမလေးကလည်း ဒေါ်လာ ၁၈.၅ သန်း အထိရရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အမရေိကနျနိုငျငံ Texas ပွညျနယျမှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ ၉ နှဈအရှယျ Ryan Kaji အမညျရှိကောငျလေးတဈဦးဟာ ယခုနှဈအတှကျ ဝငျငှအေမွငျ့ဆုံး YouTuber အဖွဈ သတျမှတျခံလိုကျရပါတယျ။ Ryan ရဲ့ YouTube channel ဟာ ဒျေါလာ ၂၉.၅ သနျးကြျောရရှိပွီး သုံးနှဈဆကျတိုကျလုံး ပထမနရောမှာ ရပျတညျနခေဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါရုပျသံလိုငျးကလညျး စပှနျဆာအမွောကျအမွားကို ဆှဲဆောငျနခေဲ့ပါတယျ။ယခုအခြိနျမှာ Ryan ရဲ့ YouTube channel ဟာ subscribers ပေါငျး ၄၁.၇ သနျး နှငျ့ ၁၂.၂ ဘီလီယံ viewအထိ ရှိနပေါတယျ။
Forbes စီးပှါးရေးမဂ်ဂဇငျးရဲ့ ” YouTube ရဲ့အကွီးမားဆုံးကွယျပှငျ့သဈ” စာရငျးအရ နံပါတျ ၂ နရောမှာ ဒျေါလာ ၂၄ သနျးဖွငျ့ Jimmy Donaldson a.k.a. Mr Beast ကရပျတညျနခေဲ့ပွီး Dude Perfect က နံပါတျ ၃ နရောမှာ ဒျေါလာ ၂၃ သနျး ၊ Rhett & Link က နံပါတျ ၄ နရောမှာ ဒျေါလာသနျး ၂၀ အထိရပျတညျနခေဲ့ကွပွီး Mark Fischbach (Markiplier) က ဒျေါလာ ၁၉.၅ သနျးဖွငျ့ နံပါတျ ၅ နရောမှာ ရှိနပေါတယျ။
အတူတူစားနေသလိုခံစားရစေဖို့ ခင်ပွန်းရဲ့နေ့လည်စာကို တစ်လုတ်စာကိုက်ပြီးမှ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ အံ့အားသင့်ရယ်မောဖြစ်ရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့သူများ
ဝိတ်ချဖို့အမြဲစီစဉ်နေလေ့ရှိတဲ့ မိန်းကလေးအများစုရဲ့အပြုအမှုကို အရှင်းသားမြင်စေမဲ့ ဓာတ်ပုံများ